Horudhac: Leicester City vs Chelsea… (Wax waliba oo aad uga baahan tahay kulanka Premier League ee caawa ka dhacaya garoonka King Power) – Gool FM
(Leicester) 19 Jan 2021. Kooxda kubadda cagta Leicester City oo markale ku riyoonaysa inay taariikh sameyso oo ay ku guuleysato horyaalka Premier League ayaa soo dhoweynaysa Chelsea.
Blues ayaa u jeedadeedu tahay inay dib ugu soo laabtaan afarta sare ee horyaalka, waxaana waajib ku ah inay garaacaan Dawacooyinka caawa haddii ay doonayaan inay soo galaan afarta sare ee premier League.
Labada kooxood ayaa shabaqooda gool ka ilaashaday kulammadii ay ciyaareen horyaalka ee ugu dambeeyey, iyadoo Leicester City ay guul 2-0 ka gaartay Southampton, halka Chelsea ay 1-0 ku garaacday Fulham kulankii West London derby.
Tababaraha Leicester City ee Brendan Rodgers ayaa rajo ka qaba in Jamie Vardy uu taam u noqon doono inuu ku soo bilowdo kulankan, inkastoo weeraryahanka la bedelay kulankii Southampton sababo la xiriira dhibaato sinta ah.
Dennis Praet ayaa sii joogteyn doona maqnaanshihiisa, halka daafaca Caglar Soyuncu uu taam yahay markale isla markaana uu ku soo bilaaban doono kulankiisii ugu horreeyey tan iyo 3-da bishii December.
Andreas Christensen ayaa dib ugu soo laabtay kooxda Chelsea kaddib markii uu ka soo kabtay dhaawac jilibka ah.
Ciyaaryahanka khadka dhexe ee Chelsea, N’Golo Kante ayaa la sheegay inuu dhaawac ka qabo muruqa, isla markaana uu seegi doono ciyaarta caawa.
>- Leicester City ayaa guuldarro la’aan ah (unbeaten) shanteedii kulan ee ugu dambeeyey oo ay horyaalka la ciyaartay Chelsea, waana heerkoodii ugu fiicnaa ee noocan oo kale ah muddo 20 sano ah, inkastoo afar ka mid ah kulammadaas ay barbaro galeen.
>- Chelsea ayaan laga badinin mid ka mid ah todobadii kulan ee ugu danbeysay ee horyaal iyo koob ee ay ku ciyaaraan garoonka King Power Stadium, iyagoo badiyay shan jeer.
>- Leicester ayaa u tartamaysa inay ku bilowdo sanad taariikhi ah oo ay gaarto saddex guul oo isku xiga oo horyaalka sare ah, waxaana markii ugu dambeysay ee ay gaaraan guulahan uu ahaa sanadkii 1968-kii.
>- The Foxes ayaa guuldarro la’aan ah (unbeaten) shan kulan oo horyaalka, waxaana ay heystaan 3 Guul iyo 2 barbaro, waana heerkoodii ugu dheeraa oo ay gaaraan tan iyo markii sagaal kulan oo ay guuldarro la’aan ahaayeen la soo gabagabeeyey bishii December ee 2019-kii.
>- Foxes ayaa badisay mid kasta oo ka mid ah 10-kii kulan ee ugu dambeeyay ee Premier League ee ay dhaliyeen goolka furitaanka, kuwaasoo ay ku jiraan dhammaan sagaalkii xilli ciyaareedkaan.
>- Tababaraha Kooxda Leicester ee Brendan Rodgers ayaa garaacay 33 ka mid ah 34 kooxood ee uu ku wajahay Premier League marka laga reebo Chelsea.
>- The Blues ayaan wax guul ah gaarin shan kulan oo horyaalka ah xilli ciyaareedkan oo ay la ciyaareen kooxaha haatan iyaga ka sarreeya, iyadoo barbaro gashay labo kulan, saddex kalena laga badiyay.
>- Chelsea ayaa guuldarro la kulmi karta saddex kulan oo horyaalka ah bartamaha isbuuca markii ugu horreysay tan iyo sanadkii 2012-kii.
>- Kooxda Frank Lampard ayaa dhalisay 11 gool 15-keedii daqiiqo ee ugu dambeeyey horyaalka Premier League xilli ciyaareedkan, kaliya Leicester iyo Manchester City oo mid waliba ay dhalisay muddadaas12 gool ayaa rikoorkaas kaga fiican Blues.
>- Timo Werner waxaa dhaaftay 10 kulan oo horyaalka Premier League uu gool dhalin waayey, haddii uu caawa dhalin kari waayana waxay noqon doontaa inuusan kulankiisii 11-aad ee horyaal gool dhalin.
Arsenal oo garoonkeeda Emirates guul raaxo leh kaga gaartay kooxda Newcastle United… +SAWIRRO